Jawharadda Islaamka: Ammaanada (Sheekh Cabdirisaaq Xasan Rakuub) – WARSOOR
Diinta Islaamku waa mid innagu boorisa ammaanada, caddaaladda, daacadnimada, dhowrsanaanta, xidhiidhinta sokeeyaha, akhlaaq wanaagga, ballan oofinta, runsheegnimada iyo tilmaamo kale oo aynaan halkan ku soo wada koobi karin oo jawharadda Islaamka ah. Qofka oo intaa ku sugnaadaa waa mid la yimid habdhaqankii tolmonaa ee Islaamka.
Rasuulku NNKH, saddex tilmaamood qofka laga helo waxa uu ku sheegay munaafaq badhaxtiran, qofka hal sifo oo saddexdaa ah lagu arkana waxa uu ku sheegay in qayb munafaaqad ahi ku jirto, “Caalamadaha munaafaqu waa saddex; marka uu hadlayo been ayuu ku hadlaa, wacadka waa uu ka baxaa, wuu khaayinaa cidda aaminta.”
Ilaahay suuradda Nisa’ waxa uu amar ka dhigay ammaanada dadkeeda in la siiyo, “Ilaahay waxa uu idin faraya ammaanada cidda leh in aad siisaan.” Aayaddani waa aayadaha Alle sida cad amarka ugu bixiyo samaynta arrinka uu kolkaa ina farayo.
Suuradda Mu’minuun, oo ka warranta tilmaamaha mu’miniinta ayaa sifadan lagu sheegay, waliba la raaciyey abaalkoodu waxa uu ahaan doono, “Waa kuwa dhowra ammaanooyinka iyo wacadyadooda.”
Guddiga Doorashooyinka oo Madaxweynaha U Gudbinaya Xilliga Ay U Muddeeyeen Qabashada Doorashooyinka Wakiillada iyo Deegaannada